के तपाइँमा छिट्टै बिर्सिहाल्ने बानी छ ? यी १० खानेकुरा तुरून्त खानुहोस् – Khabar Patrika Np
के तपाइँमा छिट्टै बिर्सिहाल्ने बानी छ ? यी १० खानेकुरा तुरून्त खानुहोस्
प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुण १९, २०७७ समय: १९:२८:०८
के तपाइँमा छिट्टै बि’र्सिहाल्ने बानी छ ? वैज्ञानिकहरुले यस्तो धेरै भुल्ने स’मस्याको कारण खास पौष्टिक तत्वको कमी रहेको बताउँदै आएका छन्। यसबारे हामी केहि जाकारी दिदै छाैँ ।बेसार, चिया, कफी, दालचिनी तथा मरिचको नियमित से’वन समेत म’स्तिष्कको क्ष’मता वृद्धिमा सहयोगी हुने विभिन्न वैज्ञानिक परीक्षणले पुष्टि गरेका छन् ।दि’नहुँ ओखर से’वन गर्नले स्म’रण श’क्तिको ब’ढोत्तरी हुन्छ । ओखरमा ओ’मेगा थ्री फ्या’ट्टी अ’म्ल, प्रोटिन, फा’इबर, ए’न्टी अ’क्सिडेन्ट जस्ता आवश्यक तत्व पाइन्छ ।
स्ट्रबरीः यसमा प्रशस्त मात्रामा एन्टी अ’क्सिडेन्ट पाइन्छ जसले मस्तिष्कका को’षको क्ष’यिकरण हुनबाट ब’चाउँछ । दहीमा प्रोटिन, का’र्बोहाइड्रेट, खनिज, चिल्लो, क्याल्सियम तथा फो’स्फोरस जस्ता लवणहरु पाइन्छ । यसले स’रीरमा लाभदायी जि’वाणुलाई समेत फाइदा पु’र्याउँछ भने हा’निकारक जि’वाणुलाई न’ष्ट गर्न सहयोग गर्छ । दहीमा एमिनो ए-सि’ड पाइन्छ जसले दि’मागी त’नाव कम गरी स्मरण श’क्तिमा ब’ढोत्तरी गर्न स’घाउ पूराउँछ ।गोलभेँडामा प्रोटिन, भिटामिन, तथा विभिन्न खाले लवण जस्ता तत्व पाइन्छ । यसमा का’र्बोहाइड्रेटको मात्रा कम हुन्छ ।
गोलभेँडामा हुने ला’इकोपिन तत्वले सरीरमा स्वतन्त्र रे’डिकल्सको सु’रक्षा गर्दछ र मस्तिष्क कोषको क्ष’यिकरण रो’क्दछ ।मसलाको रुपमा तुलसीका पातको प्रयोग निकै ला’भदायक हुन्छ । छिटो भुल्ने स’मस्या भएका मानिसले दिनदिनै तुलसीको पात खाँदा त्यसले फाइदा गर्छ ।अलैँचीः यसमा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन तथा फा’इबर हुने भएकाले यसको से’वन समेत म’स्तिष्कको स्वास्थ्यका लागि फा’इदाजनक हुन्छ ।जाइफलः जा’इफलको से’वनले सरीरलाई चिसोबाट ब’चाउने मात्र होइन यसमा हुने विशेष तत्वले मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्न तथा स्म’रण श’क्ति ब’ढाउन सहयोग गर्छ ।